Xarumaha xilliyada firaaqada carruurta oo aan lagu qanacsanayn - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Catarina Gustafsson/SR Gotland
Xarumaha xilliyada firaaqada carruurta oo aan lagu qanacsanayn
La daabacay måndag 16 september 2013 kl 13.57
Waalidiin badan ayaan ku qanacsanayn xarumaha xilliyada firaaqada ee carruurta oo ay ku badan yihiin carruurta joogta, halka uu shaqaaluhuna yar yahay. Baaritaan ay Hay’adda dugsiyadu ku sameysan waalidiinta carruur tiradoodu dhan tahay 124000 oo cunug ayaa lagu ogaadey in saddexdii waalidba midkood uu saluugsan qaabka xarumaha xilliyada firaqaada carruurta.
Tirada ardayda ay koox waliba ka tirsan tahay waxay qiyaas ahaan gaaraan 40 arday kooxdiiba. Shantii oo ugu dambeysey waxaa sannad walba ku kordhaayey toddoba arday.
Dhanka kale waalidiinta ayaa guud ahaan aad ugu qanacsan hawlaha dugsiyada barbaarinta, waa fasalka ay carruurtu dhigato inta aysan bilaabin fasalka koowaad ee dugsiga hoose. Tobankii waalidba sagaal ka mid ah ayaa u arka in shaqaaluhu ay qabtaan hawlo wanaagsan oo ay carruurtu ku sugan yahay xaalad ammaan ah, habka waxbaridduna wanaagsan yahay.
Xilliga ay carruurtu joogto dugsiyada barbaarinta waxaa lagu kordhiyey laba saac marka la barbardhigo toddoba sano ka hor. Anna Ekström oo ah agaasimaha guud ee hay’adda dugsiyadu waxay dadka mas’uulka ah kula talineysaa in ay arrintaas ka fiirsadaan:
- Waxaan qabaa in ay habboon tahay in mas’uuliyiinta maamulada degmooyinka oo iyagu dejiya qaababka hawlaha dugsiyada barbaarinta iyo xarumaha xilliyada firaaqadu ay si dhab ah uga fekeraan arrintaan, maadaama ay hadda carruur badani waqti dheer joogaan goobahaas marka la barbardhigo waqtiyadii hore.
Waraysigaan waxaa agaasimaha guud ee hay’adda dugsiyada la yeeshay idaacadda Ekot.